Nagu saabsan - Guangzhou Naiwei Robot Technology Co., Ltd.
Guangzhou Naiwei Robot Technology Co., Ltd., oo la aasaasay Febraayo 18, 2020, tii ka horreysay waxay ahayd Naiwei (Dongguan) Robot Technology Co., Ltd.
No.2 warshad laan
Shirkadda waxaa si wadajir ah u maal-galiyay oo u aasaasay Waaxda Sayniska iyo Teknolojiyada ee Gobolka Guangdong, Xafiiska Sayniska iyo Teknolojiyada iyo Maamulka Degmada Guangzhou Baiyun Waxaan haynaa koox xoogan oo R & D ah, 1 Ph.D, 2 injineerro heer qaran ah, 5 masters, iyo ku dhowaad 50 shaqaale injineernimo ah oo haysta shahaadada bachelor-ka, oo daboolaya laser kala duwan, mashiinno, elektaroonig, koronto, haydaroolig, softiweer, teknolojiyada muuqaalka ee R&D iyo codsiga is-dhexgalka.
Hadafkeena koowaad waa inaan soo saarno mashiinka maaskaro xawaare sare leh si loo daboolo baahida degdegga ah ee suuqa gudaha iyo dibedda. Horumarka degdegga ah, hadda waxaan haysannaa in kabadan 600 oo shaqaale ah. Aagga dhirta wuxuu ka badan yahay 16,000 mitir murabac.
Waxay ku yaalliin Sayniska & Teknolojiyada Beerta, waxaan diiradda saareynaa qalabka caqliga, oo ay kujiraan kala-goysyada isku dhafan, qalabka ultrasonic, mashiinka maaskaro iyo aaladaha la xiriira, aalado isku-dhafan oo isku-dhafan, mashiinka goynta 3D, mashiinnada mashiinnada gaarka loo leeyahay iyo kuwa aan caadiga ahayn, aadanaha- aalado iskaashi robot.
Dhammaan alaabooyinkeenna waxaa lagu soo saaraa iyadoo loo eegayo heerarka CE, CCC, ISO 9001, markastana sii wanaajinta heerarka si loo daboolo baahida macaamiisha. Waxaan diyaarinay hal koox oo adeeg ah, si dhakhso leh oo waxtar leh u xallino dhammaan noocyada su'aalaha iyo dhibaatooyinka macaamiisha.
Wax soo saarkayagu waa kuwo ay ku kalsoon yihiin macaamiisha adduunka oo idil, wax soo saar bille ah ayaa gaaraya 1000 nooc. Xawaaraha sare hal jiido hal mashiin mashiinka mashiinka ， socodka xasiloon, qiimaha tartanka, oo aad loogu amaanay macaamiisheena.